Madaxwayne Gaas oo maantay xariga ka jaray Saldhiga Booliska Gaalkacyo oo dayac-tir dhisme lagu sameeyay – Radio Daljir
Agoosto 18, 2015 8:43 b 0
Gaalkacyo, August 18 – Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 18-8-2015 magaalada Gaalkacyo xariga kaga jaray Saldhiga Booliska Gobalka Mudug oo lagu sameeyey dib u habeyn.
Xafladda Xarig jarka oo ka dhacay xarunta cusub ee saldhiga Booliiska Gobalka Mudug waxaa kasoo qeyb galay Gudoomiye ku xigeenka Gobalka Mudug Axmed Muuse Nuur , Taliyaha Ciidanka Booliiska Puntland Gen : Cabdirisaaq Afguduud , Saraakiil katirsan ciidanka Booliska Puntland iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii uu xariga kajaray xaruntaas cusub , waxaa uu indha indheeyey qeybaha uu ka koobanyahay.
Saraakiisha booliska ayuu Madaxweynuhu kula dardaarmay in xaruntaan cusub ay ilaaliyaan Nidaamka shaqo iyo Nadaafadeeda, islamarkaana ay noqoto xarun si joogto ah u shaqeynaysa .
Magaalada Gaalkacyo waxaa si rasmi ah uga soconaya mashaariicda horumarineed ee ay dawladdu ugu talagashay , amaankeeduna maalinba maalinta ka dambeeysa waa uu sii wanaagsanaanayaa.